Fampandrosoana · Oktobra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fampandrosoana · Oktobra, 2018
Tantara mikasika ny Fampandrosoana tamin'ny Oktobra, 2018
Manangon-bola Hanaovana Horonantsary Fanadihadiana ilay ‘Ôrkesitra Voahodina’ ireo Mpamokatra Horonantsary
Miaina voahodidina fako ireo ankizy ao Cateura, tanàna mahantra ivelan'i Asunción, Paragoay. Aminà toerana izay mahalafo ny lokanga mihoatra nóho ny trano iray, manova ny fiainan'ireo ankizy ireo ilay mpiangaly mozika, Fabio Chavez, amin'ny fampianarana azy ireo hitendry mozika miaraka aminà zavamaneno vita avy amin'ny fako.
Shina: Mametraka an-tsarintany ireo fandroahana mahery vaika mba hampatsiarovan-tena ireo mpividy trano
Taterina ary resahina be amin'ny aterineto ireo fandroahana mahery setra maro any Shina sy ireo traboina mahatsiravina aterany, fa inona no azo lazaina mikasika ilay trano amidy rehefa voadio ireo poti-bato sy ny momba ireo olona mividy izany?
Fitetezana Blaogy Libiana: 26 Oktobra- Ny Andro Mainty sy ny Filankevitry ny Filaminana
Nahoana no antsoina hoe ''Andro Fisaonana'' na ''Andro Mainty'' ny 26 Oktobra any Libia ary ahoana no hankalazana ny fahatsiarovana izany? Ao anatin'ity lahatsoratra nosoratan'i Fozia Mohamed ity no milaza amintsika bebe kokoa mikasika izany tranga izany ireo blaogera Libiana.
Azia Atsinanana 24 Oktobra 2018
Vaovao misimisy kokoa momba ny fihaonambe “iSummit Dubrovnik 2007″
Fanabeazana 18 Oktobra 2018
Fomba iray mahaliana hamondronana vaovao vaovao sy maharaka izay lazaina amin'ireo lohahevi-dehibe, toy ny hoavin'ny "Commons", ireo "vondrom-piarahamonina", ary ny fomba fampitana izany ho an'ireo izay manandanja izany hoavy izany, dia hoan'ny ny kilonga izany, ny famahanana bilaogy mivantana ny Fihaonambe "iCommons iSummit".
Koety: Tonga Amin'ny Fomba Ofisialy Ny Fahavaratra
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 17 Oktobra 2018
Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fahavaratra ao Koety ary miady hevitra mikasika ireo toerana tsara handosirana ny hafanana ireo blaogera. Tsaratsara kokoa ve ny mitady paradisa voaaro mba hitoniana any an-trano na mandeha any am-pitandranomasina ary mety ho tratran'ny orana sy ny alahelo? Vakio ny famintinana ireo blaogy kowetiana nataon'i Abdullatif Al Omar mba hahafantarana izany.
Fanavaozana mikasika ny kaonferansa “We Media”
Fahalalahàna miteny 17 Oktobra 2018
Lahatsoratra tselika kely avy any Londres mba hampahafantarana anao fa handray anjara amin'ny resaka skype sy amin'ny IRC sehatra fifanakalozan-kevitra amin'ny aterineto miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices ny iray amin'ireo mpandahateny aty, i Nitin Desai .